घुससहित पक्राउ परेका उपकुलपती धरौटीमा रिहा – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ श्रावण २१, मंगलवार २०:५१
काठमाडौं । घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र डा. रामहरि रौनियारलाई अन्तत विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
राजकुमार र रामहरिलाई क्रमशः ४८ लाख र ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको स्रोतले बताएको छ ।उनीहरुले आज नै धरौटी वापतको रकम अदालतमा बुझाइसकेका छन् । गत २६ असारमा रौनियारद्वय ८ लाख रुपैयाँ घुससहित उपकुलपति निवास धरानबाट पक्राउ परेका थिए ।